प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट, पुलिसले पुर्वाञ्चललाई नौ विकेटले हरायो | Nepal Cricket News | Cricnepal.com
राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप एकदिवसिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागिए टिम नेपाल पुलिसले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । जितसंगै पुलिसले सेमिफाइनलको सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
Quick Check – Match3– Nepal Police Club 105 for 1 (Sunil Dhamala 52) beat Eastern Region 104 (Mehboob. Alam 40) by9Wickets.
किर्तीपुर क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले पुर्वाञ्चललाई नौ विकेटले हरायो । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पुर्वाञ्चल ३७ ओभर एक बलमा मात्र एक सय चार रनमा अलआउट भयो । उसका लागि दुई खेलाडीले मात्र दोहोरो अंक छुन सके । आर्मी विरुद्ध नौ विकेटले पराजित भएको सुदुर आज पुलिस विरुद्ध पनि सुरुवात देखि नै धरासायी बन्यो ।
२४ रनमा पहिलो विकेट गुमाएको पुलिसले ५२ रन हुदा पाच विकेट खेर फालेको थियो । एक पछि अर्को विकेट गुमाएको पुर्वाञ्चल अन्तत एक सय चार रनमा समेटियो । उसका लागि महबुब आलमले ४० र अमल दाशले १३ रन बनाउदा २० अतिरीक्त रन पाएको थियो । पुर्वाञ्चललाइ कम स्कोरमा रोक्न सिद्धान्त लोहनीले तीन तथा ललीतसिंह भण्डारी र सुसिल कडेलले दुई दुई विकेट लिए ।
जवाफमा पुलिसले मात्र १७ ओभर एक बलमा एक विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गरयो । पुलिसको जितमा सुनिल धमलाले ५२ तथा दिलिप नाथले ३६ रन बनाए । समुह एको अन्तिम खेलमा अब पुलिसले अर्को विभागिए टिम आर्मीसंग खैल्नेछ । प्रतियोगितामा भोली पुर्वाञ्चल र सुदुरपश्चिम विच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
Related Items:Domestic, Eastern Region, Mehboob Alam, Nepal Police Club, PM Cup 2074, Sunil Dhamala
बंगलादेश न्युजिल्याण्डलाई पाच विकेटले हराउन सफल